မြန်မာ e-Books များ | Myanmar Blog
ရွှေစကား နှင့် KoThuRa, Mg Trojan
ဂျူး – သူတို့တွန်းအားကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်မိသွားတာပါ။ (၀တ္ထုတို) (
ဂျူး – ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး – ဘ၀ဇာတ်စရာ (၀တ္ထုတိုများ) (06/30)
ဂျူး – ငါးမျှားခြင်း – ၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး – လူနဲ့ကြိုး – ၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး – ရေမျောသီ-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး – ၀တ္ထုတိုများ (06/30)
ဂျူး – ရွက်လှေများ (၀တ္ထုတို) (Dec 23, 2008)
ဂျူး – ပင်လယ်နဲ့တူသောမိန်းမများ (Dec 23, 2008)
စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ) – နေပန်းပွင့်ရဲ့ အပြာရောင်စာမျက်နှာသစ် (Dec 23, 2008)
စိုးမြတ်သူဇာ – feeling 35 (06/30)
ဆွေဆွေအောင် – လွယ်အိတ်ကလေး (Dec 23, 2008)
ဆွေဆွေအောင် – လူညာကြီး (Dec 23, 2008)
ညိုနှင်းအိမ် – အိမ်မက်ပန်း အလွမ်းနှင်းဆီ (Dec 23, 2008)
မချိူမော်+ချစ်စံဝင်း – ဒေါင်းဖတ်စာပုံပြင်များ (Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ – ငြိုးမာန်ဖွဲ့သူရယ်
မစန္ဒာ – ငယ်သူမို့မသိပါ
မစန္ဒာ – တိမ်ဖုံးလို့လမသာ..(07/08)
မစန္ဒာ – စိမ်းရွက်တစ်ဝေေ၀ (07/08)
မစန္ဒာ – ဂျီဟောသူ (07/08/08)
မစန္ဒာ – ဆံဌဂံ(Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ – ပန်းပွင့်ခရေ(Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ – ပုစ္ဆာ (Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ – နှင်းဆီ(Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ – ၀တ္ထုတိုများ ၇ (Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ – ၀တ္ထုတိုများ ၄(Dec 23, 2008)
မစန္ဒာ – အရိပ်(Dec 23, 2008)
မဦး – ပန်းပွင့်မျက်နှာ လိပ်ပြာနှုတ်ခမ်း (၀တ္ထုတို) (Dec 23, 2008)
မိုးမိုး(အင်းယျား) – စိန်တစ်ပွင့်
မိုးမိုး(အင်းလျား) – ၀တ္တုတိုများ ၄ (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) – မေတ္တာကမ်းနားအချစ်သစ်ပင် (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) – ဝေဒနာကြာပွင့်နီ(Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) – ညီမလေးက အချစ်ကိုကိုးကွယ်သတဲ့လား (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) – မသုဓမ္မစာရီ (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) – မှတစ်ဆင့် (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) – ဂျိူး (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) – ပျောက်သောလမ်းမှာစမ်းတ၀ါး (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) – မြူမှောင်ဝေကင်း Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) – မီးရောင်အောက်ကိုဝင်လျှင် (Nov 28,2009)
မိုးမိုး(အင်းလျား) – မြန်မာပြည်တွင်နေကြသည်။ (Nov 28,2009)
ရှင်မိုး(ဆေးတက္ကသိုလ်) – နေခြည်သစ်နှင့်စတင်ခြင်း (Dec 23, 2008)
ရှား – အဖော် (Dec 23, 2008)
လူထုဒေါ်အမာ – မြန်မာမဟာဂီတ (Dec 23, 2008)
လွန်းထားထား – မာန၏နောက်ဆက်တွဲများ (06/30)
၀င်းဝင်းမြင့်(နန်းတော်ရှေ့ ) – ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့ရင်ခုန်သံ (Dec 23, 2008)
ဝေေ၀အောင် – ပွင့်ဦးခြွေသူ(Dec 23, 2008)
ဝေေ၀အောင် – ကျွန်မရဲ့ပင့်ကူ (Dec 23, 2008)
ဝေေ၀အောင် – နေရောင်လွမ်းတဲ့မိုးပြာကော င်းကင် (Dec 23, 2008)
ဝေေ၀အောင် – ခါချဉ်တစ်ကောင်အကြောင်း (Dec 23, 2008)
သင်းသင်းသာ – စင်ရော် (Dec 23, 2008)
ကိုရွေထူး(ပြည်) – မတရားမလုပ်ပါနဲ့ နှစ်ပါသွားလေးကပါရစေ။
ကံချွန် – ကျကျမ်း
ငွေကြည် – အူလှိုက်သည်းလှိုက်ဟာသများ (06/26)
ငွေကြည် – ကြွကြွရွရွဟာသ (06/26)
ငွေကြည် – မြန်မာရိုးရာဟာသများ (06/26)
ငွေကြည် – ပြည့်ပြည့်၀၀ဟာသများ (06/26)
ငွေကြည် – တိုတိုထွာထွာဟာသများ (06/26)
ငွေကြည် – လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ဟာသ (07/01)
စောတင်မောင် – ဖူးစာဆန်းဆန်း
စောတင်မောင် – ပျံလွားပါဝင်သော လွင့်မျောမိုးတိမ် ( ၁ + ၂)
စောတင်မောင် – ပျံလွားပါဝင်သော လွင့်မျောတိမ်တိုက် ၃+၄
စောတင်မောင် – အမှောင်ကမ္ဘာ ( ၁+၂)
စောတင်မောင် – အမှောင်ကမ္ဘာ ( ၃ +၄)
စောတင်မောင် – နှောင်ကြိုးကိုယ်ဆီ ၁
စောတင်မောင် – နှောင်ကြိုးကိုယ်ဆီ ၂
စောတင်မောင် – အိမ်မက်ဆိုး ၁ ( Jan 1, 10)
စောတင်မောင် – အိမ်မက်ဆိုး 2
ဆွေမင်း – တွတ်ပီပါဝင်သော ဘ၀တစ်ခုအမှတ်တရ (07/02)
ဆွမင်း(ဓနုဖြူ) – တွတ်ပီ – မြစမ်းသီလာ
ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏ – သမိန်ပေါသွပ်ပါဝင်သော မညံတညံကာတွန်းများ
သမိန်ပေါသွပ် – မိုးနတ်မင်းကာတွန်းများ
သမိန်ပေါသွပ် – မင်္ဂလာဆောင်
သမိန်ပေါသွပ် – မထီးကျွန်း
သမိန်ပေါသွပ် – ဘုံမြင့်စံ
ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏ – သမိန်ပေါသွပ် ပါဝင်သော ကာတွန်းအက်ဆစ်
သမိန်ပေါသွပ် – ဖတ်ကြမယ်ဟေ့ကောင်းကောင်း
၀ိဇ္ဖာ – တစ်ရွာလုံးနဲ့တစ်ယောက် (ရွှေအဆင်း ခေတ်ပြိုင်မှတ်စုများ) (PDF version)
၀ိဇ္ဖာ – ပန်းတစ်ပွင့်၏ရံနံခက်ဆစ် (update)
၀ိဇ္ဖာ – ကျွန်တော်၏ဓာတ်တိုင်	(update)
တင်အောင်နီ – ပြာလောင်ပါဝင်သော ပိုင်ရှင်ရှိသည်
တင်အောင်နီ – အင်ဂျင်နီယာပြာလောင်
တင်အောင်နီ – ပြာလောင်ပါဝင်သော လွမ်းတော်မူလို့စာကိုစီတယ်။
တင်အောင်နီ – ပြာဂလောင်ပြာလချောင်ပါဝင်ေ သာ သူထက်ကဲ
တင်အောင်နီ – ပြာဂလောင်ပြာလချောင်ပါဝင်သော ဝေလေလေ
တတိုင်းမွှေး – (တွတ်ပီ) အချစ်အတွက် အသက်ပင်သေသေ ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွှေး – (တွတ်ပီ) လူမစွမ်းနတ်မ ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွှေး – (တွတ်ပီ) မီးဝိုင်းနေသောလိပ်များ ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွှေး – (တွတ်ပီ) အချစ်အတွက်စွန့်စားခန်း ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွှေး – (တွတ်ပီ) ရာဇ၀င်တွင်မည့်ရည်းစားစာ ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွှေး – (တွတ်ပီ) ခြေတစ်ခြောင်းငေါင်း ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွှေး – (တွတ်ပီ) မသေးမျှင်နှင့်ရွှေသုံကျပ်သား ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) ခွေးကလေး ဂျော်ကီ ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) ကျားမင်း ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) သက်သက်လွတ်စားသူများ ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) ဟန်းချိန်းဖုဒ်ချိန်း ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)မြွေဇာတ်လမ်း ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)အိမ်မက်ဇာတ်လမ်းများ ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)ကြက်ဥသူခိုး ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) အိပ်ဆေး( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) ကျားမရဆိတ်မဆုံး ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) လူပျိုကြီးနှစ်ယောက်အကြောင်း( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) ပျားရည် ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) ရွှေခဲနှင့်ဖိုးနီ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) ငွေရောင်ဝက်ကြီး ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)ဂီတသင်တန်း ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)ရေစုန် ရေဆန် ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)အစွမ်းထက်ဆုံးလက်န က် ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)မသေးမျှင် ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) လူပျိုကြီးနှစ်ယောက်အကြောင်း ၅( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)ရိုးမထဲကညတစ်ည ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)တွတ်ပီငှက်ချီခံရေ သာဇာတ်လမ်း ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)ပျားမုဆိုး ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) ညောင်ညိုပင်လမ်းခွဲ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)တယ်ပင်ရေစခန်း ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) ဆေးဆရာကြီး ဦးဧရာချမ်း( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ) မျောက်တို့၏ကလဲ့စား ( Jan 1, 10)
တတိုင်းမွေး – (တွတ်ပီ)ငါသမီးလျှာထွက်နေတ ယ်။ ( Jan 1, 10)
ကာတွန်းအောင်ရှိန် – ဖိုးဆိတ်ဖြူနဲ့ ကြာဇံပါဝင်သော မဟာဂနိုင်
အော်ပီကျယ် – သူ/သူမ
အော်ပီကျယ် – ကာတွန်းအတွေးစုများ တတိယအစု
မင်းသုဝဏ် – ကလေးပုံပြင်များ
ဦးသန်းထွတ် – မိုးခြိမ်းတာကြောက်တဲ့အမေနဲ့ အခြားပုံပြင်များ ( jan 12, 2008)
အရှင်ဆန္ဒာဓိက – ကျေးဇူးသိတတ်သော နွားကလေးနက်ချောနဲ့ ဓမ္မပုံပြင်များ
ခင်မောင်တိုး(မိုးမိတ်) – မော့ရင်းရယ်စရာ အရက်လောကဟာသများ
ခင်မောင်တိုး (မိုးမိတ်) – အမေရိကန်သမတ္တတို့ရဲ့ ဟာသများ (Nov 11,2008)
ဇ၀န – ဆိုးပေ ၁ (Nov 11, 2008)
ဇ၀န – ဆိုးပေ ၂ (Nov 11, 2008)
ဇ၀န – ဆိုးပေ ၃ ( Nov 11, 2008 )
မောင်ကောင်းထိုက် – ဟာသပဒေသာ ၂ (07/04)
မောင်ကောင်းထိုက် – ဟာသပဒေသာ ၃ (07/04)
မောင်ကောင်းထိုက် – ဟာသပဒေသာ (၁၄) (07/04)
မောင်ကောင်းထိုက် – ဟာသများ (လက်ရွေးစင်) (07/04)
မြန်မာကျူးပစ်ဖိုရမ် – ရယ်စရာမောစရာ နိုင်ငံတကာ ဟာသများ (07/08)
ရဲစတိုင်း – ပြုံးပြီးမှရယ် (Nov 11, 2008)
ထူးဆွေအောင် – မကြောက်ဘူးဆို
ထူးဆွေအောင် – ရေခြားမြေခြား (Nov 11,2008)
ဦးကျော်ဇေယျ – ရှေ့နေနှင့်တရားခွင်ဟာသများ (06/ 26)
အဏာဝါစိုးမိုး – ဟီးဟီးဟားဟားမော်တော်ကား (Nov 11, 2008)
NYP -သင်္ကြန်စာ (Nov 11,2008)
ကောင်းထက် – စုဖုရားလတ်နဲ့ ပါတော်မူဖြစ်ရပ်များ (08/24)
ကိုကို(စက်မူတက္ကသိုလ်) – အယ်ဒီတာဒိုင်ယာရီ (7days news အယ်ဒီတာဒိုင်ယာရီစည်းမူ) (PDF version)
ကျော်ဝင်း – စိန်ခေါ်ကျသူများ (06/26)
ကျော်ငြိမ်း – ရဲဘော်သုံးကျိ်ပ် ( 08 / 24)
ချစ်နိုင်( စိတ်ပညာ) – စစ်သေနင်္ဂဗျူဟာ ..
စံ-ဇာဏီဘို – အချစ်ဗေဒင် (07/29)
စံ-ဇာဏီဘို – အချစ်လက္ခာဏာ (07/29)
ညီသစ် – ဆင်းရဲသောဖေဖေနှင့်ချမ်းသာ သောဖေဖေ (ဘာသာပြန်) (08/24)
ဇင်သန့် – စာဖတ်သူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ် အောင် စနစ်တကျစာဖတ်နည်း (ဘာသာပြန်)
မောင်သာချို – သမီးလေးဖတ်ဖို့ (06/28)
ရန်အောင် – အိမ်ထောင်ရေးအဘိဓမ္မာ
ရဲမြလွင် – မြန်မာစောင်း (08/24)
လူထုစိန်ဝင်း – မူပိုင်ခွင့်
ဖေမြင့် – လူသုံးပစ္စည်းရောင်းသူများ နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ (အမျိုးသားစာပေဆုရစာအုပ်) (08/24)
မင်းယုဝေ – ပထမမြန်မာများ (08/24)
မောင်ထွန်းသူ – ဘာကြောင့်ဂျပန်အောင်မြင်ခဲ့ သလဲ (08/24)
မြတ်ငြိမ်း – လက်ဆောင်မွန်(ဘာသာပြန်) (07/29)
မြတ်ငြိမ်း – ဘယ်သူငါ့ဒိန်ခဲနေရာရွေ့လို့ ရမလဲ (ဘာသာပြန်)(0729)
ဒေါက်တာသန်းထွန်း – သမိုင်းနဲ့စကားပြောခြင်း
ဦးဖိုးကျား – ၃၇ မင်း(06/28)
ဦးဖိုးကျား – သီပေါမင်း ပါတော်မူအရေးတော်ပုံ (08/24)
ဦးပေါ်ဦး ၏ စကားအင်္လကာ (06/28)
ဒေါက်တာလှဖေ – စိတ်ဝင်စားစရာသင့်ခန္ဓာ (07/29)
ဒေါက်တာသန်းထွန်း – ငါပြောချင်သမျှ ငါအကြောင်း
ဒေါက်တာသန်းထွန်း – သမိုင်းနဲ့စကားပြောခြင်း (07/29)
နေ၀င်းမြင့် – အိုင်ဒီယာအက်ဆေးများ (06/28)
သန်းမြင့်ဦး – အချစ်နဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ နည်းဗျူဟာများ (08/24)
အငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီး ဦးသက်ထွန်း – အနောက်တိုင်းမှနှုတ်သီးကောင်းလျှာပါးတို့ ၏ အဆိုများ (08/24)
အတ္တကျော် – အာရှသားများစဉ်းစားနိုင်သလား (ဘာသာပြန်) (08/24)
အောင်ခန့် – နှလုံးမည်းနဲ့ နှလုံးဖြူ (08/24)
အောင်သင်း – အနာဂတ်ကိုမကြောက်နဲ့ (06/28)
အောင်သင်း- မျိုးဆက်သစ်အတွက် ဂန္တ၀င်မိတ်ဆက် (06/28)
ဒေါက်တာနိုက်တင်ဂေလ်း – သန္ဒေကာတာ ( ကိုယ်ဝန်တားခြင်း နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်) (07/08)
မောင်သိန်းဖေ – ကုလားဗမာတိုက်ပွဲ (08/24)
သိန်းဖေမြင့် – ၁၉၃၀ တစ်ဝိုက်မြန်မာနိုင်ငံရေးသ မိုင်း (08/24)
ဦင်္းပညာ – ကရင်ရာဇ၀င်
တက္ကသိုလ်နေလင်းအောင် – အမုန်းတရား၏သမီးတော်
harry potter7(06/26)
စာအုပ်တွေကို ခေါင်းစဉ်အလိုက်ခွဲပြီးရှာဖို့ (ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သာ)
စာအုပ်စင်လေးထဲဝင်ဖို့အောက်ကပုံလေးကို click လုပ်ပါ။
၀တ္ထုများ ၁ (အမျိုးသားစာရေးဆရာများသာ)
၀တ္ထုများ ၂ (အမျိုးသားစာရေးဆရာများသာ)
၀တ္ထုများ ၃ (အမျိုးသားစာရေးဆရာများသာ)
အင်္ဂလိပ် ebook များ
ဒါကတော့ MMBLOGS.NET ကတင်ထားတာလေးတွေပါ။
ဒါကတော့ www.shwesagar.com ကပါ။
Latest Myanmar E Book www.daylightonline.co.cc
E-Books (မြန်မာ) 10.05.2009 update
full post is ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သော စာအုပ်များ
~ by Ko Ko Ye` on October 28, 2007.
19 Responses to “မြန်မာ e-Books များ”
[…] မြန်မာ e-Book များ စာရင်းထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။ […]
E Book Download « Myanmar Blog said this on	September 24, 2008 at 1:32 am | Reply
ဒီစာမျက်နှာအထိရတယ် link တွေကိုနှိပ်လိုက်ရင်မရတော့ဘူးဘာလို့ လည်းမသိဘူး
download လုပ်ချင်တာအရမ်းပဲ စိတ်ညစ်ပါတယ်
haymarmin said this on	November 21, 2008 at 3:21 pm | Reply
ပုဂံ၊ညောင်ဦး ရဲ့လူဦးရေ ကိုသိချင်ပါတယ်။ ပုဂံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ဘုရားအကြောင်းတွေက ဘယ်မှာရှာရှာ ရနိုင်ပေမယ့် လူဦးရေစာရင်းကျတော့ ရှာဖွေလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။ online စွယ်စုံကျမ်း လို့ဆိုထားတာကြောင့် စွယ်စုံကျမ်းစာအုပ်လို အက္ခရာစဉ်အတိုင်းလည်း မဟုတ်ဘဲ internet ထဲမှာလည်နေပါတယ်။
kothet said this on	January 1, 2009 at 11:49 am | Reply
ပုဂံညောင်ဦးရဲ့ လူဦးရေသိချင်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ အကိုရယ်။
ဘယ်ခုနှစ်က လူဦးရေကိုသိချင်တာလဲ။ ဘယ်လက်ထက်ကလဲ ယခုလက်ရှိအတွက်လား ? ဘာအတွက်အသုံးပြုဖို့လဲ စသဖြင့်ရှိပါသေးတယ်။ လက်ရှိလူဦးရေကို တရားဝင်သိချင်ရင် လ.ဝ.က ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ 😀
Ko Ko Ye` said this on	January 1, 2009 at 5:04 pm | Reply
ဖေမြင့် ရဲ့ ebook တွေတင်ပေးပါလားဗျာ။ပြီးတော့ registery,database,basic programming,electronic…. မြန်မာလို ebook လေးတွေတင်ပေး စေချင်ပါတယ်။
တင်ပြီးသားရှိရင်လည်း ညွှန်ပြပေးပါ ခင်ဗျာ။
ye zaw tun said this on	February 4, 2009 at 5:06 pm | Reply
မဖြေပေးကြတော့ဘူလားဗျ။တကယ်ကို သိချင်နေလို့ပါ။အခုကျွန်တော် MZ မှာ register လုပ်နေပါတယ်။MZ ကအကိုတွေ(admin)တွေကို ခင်ချင်ပါတယ်။forums မုာ ၀င်ဖတ်နေတာ တစ်လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။mdy က internet ဆိုင်မုာလုပ်နေပါတယ်။ကူညီကြပါဗျာ။
ye zaw tun said this on	February 5, 2009 at 3:44 pm | Reply
It site is very very good for us, I am book lover.
blackjack said this on	February 16, 2009 at 10:33 am | Reply
for the sake of book lovers… for the sake of everyone who far away from our mother land!
sleepyhead said this on	February 25, 2009 at 3:44 pm | Reply
ဒဂုန် တာယာ အစား ဒဂုန် တာ ရာ လို့ ပြင်ရေးပေးစေလိုပါသည်။
ရန်နောင် ပဲခူး said this on	March 21, 2009 at 6:20 pm | Reply
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပဲခူးက ကိုရန်နောင်
အမှတ်တမဲ့ မှားသွားပါတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ
Ko Ko Ye` said this on	March 22, 2009 at 1:41 pm | Reply
ဒီစာမျက်နှာကို ဖတ်ရတဲ့အတွက် စုစည်းပေးထားမှုတွေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော်တို့လို မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဝေးနေသူများအတွက် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ မြန်မာစာကို ဖတ်ခြင်ပေမယ့် စာအုပ်ဝယ်မရတဲ့အခါမှာ ဒီစာမျက်နှာကိုတွေ့တဲ့အတွက် ၀မ်းသာမဆုံးဖြစ်မိပါကြောင်း….
Soe Aung said this on	April 10, 2009 at 9:59 am | Reply
so tkz per ..fri
luthit said this on	April 25, 2009 at 10:55 am | Reply
Pascal said this on	May 17, 2009 at 6:38 pm | Reply
ဆုမြတ်မွန်မွန် စာအုပ်ပါ တင်ထားပါလား သူစာအုပ်တွေက အရမ်းကောင်းတယ်
juemyatnoe said this on	June 5, 2009 at 11:13 am | Reply
This site isaBurmese Music and Literature bank. Everyone from Burma should giveavisit and get some knowledge or listen the very Burmese music. I really appreciate this site for letting download, posting variety of Burmese e-books and very true Burmese music especially original songs. Again, thanks and please keep up for everyone who loves Burma, Literature and Music.
shwemg said this on	June 6, 2009 at 12:13 am | Reply
Dr.Nay Minn Myat said this on	July 24, 2009 at 11:18 am | Reply
အခုမှပဲ ဒီဆိုက်ကို ၀င်ဘူးတာပါ လေးစားပါတယ်ဗျာ စာအုပ်တွေကို စုပေးထားနိုင်တာ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ဆရာ နန္ဒာသိန်းဇံ ရဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်တို့၏နောက်ကွယ်၌ကိုတော့ ရှာလို့မတွေ့ဘူး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အခုလိုစုစည်းပေးထားတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အောင် said this on	August 5, 2009 at 1:28 pm | Reply
စာအုပ်တွေ တင်ထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လေ connection က မကောင်းတော့ ဒီစာမျက်နှာကနေ မတတ်တော့ဘူး။ မြင်သာမြင် မဖတ်ရတော့ဘူးပေါ့နော်။ စာအုပ်တွေ စုထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ စာအုပ်ကောင်းလေးတွေ စုနိုင်ပါစေနော်။
Phyu Lay said this on	August 19, 2009 at 4:54 pm | Reply
သခင်ဘသောင်းရဲ့ ပန်းသာမစာဥ စာအုပ်များတင်ပေးနိူင်ပါသလားရှင်..
ဒဂုံခင်ခင်လေးရဲံ စာဆိုတော် နှင် အိုးဝေညိုမြရဲံ ကူန်းဘောငရှာပုံတော် စာအပ်ြလည်း မျှနိုင်သူရှိပါက မျှ ပေးကြပါ ကျေးဇူးပါရှင်
မသဒ္ဓါ said this on	October 2, 2009 at 9:28 am | Reply